2007 model အထက်ကားဈေးနှုန်း
စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	2007 model အထက်ကားဈေးနှုန်း
လူစီးမော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ (Reconditioned)(Saloon အုပ်စု)
Acent/ Avante/ I30/ I40
New Click, Verna
Carens/ Forte/ K3/ Cerato/ Cerato Forte/ Shuma
Opirus/ K7/ K9/ Amanti
Morning (1350 CC)
2012 Model Only
Benz S 600 L
S Class 550
Benz, CLS-550 Class Coupe
Benz SLK/ SLK-350
Belta (1300 CC)
(2012 Model Only)
FRS/ Scion GT- 86 Subaru
(၂) အထက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ယာဉ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားလာသော ယာဉ်များဖြစ်ပါက One Stop Services အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃ ) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက်နေ့အတည်ပြုသည်။
2007 Model Only ၁၁၁
Toyota Probox/ Succeed
လူစီးမော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ (Reconditioned)(Hatchback အုပ်စု)
လူစီးမော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ (Reconditioned)(Wagon အုပ်စု)
လူစီးမော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ(Reconditioned)(Pick Up အုပ်စု)
<< Start < Prev 123 Next > End >>	JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3783277 Since June 2008